ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းပုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းများအတွက်တရုတ်ချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန် | ရွှေ Sanon
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန်, GB ကို / 8162-2008 Standard တှငျစက်မှုအဆောက်အဦများအတွက်ချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန်။ ပစ္စည်းထိုကဲ့သို့သော 10,20,35,45 နှင့် Q345, Q460, Q490,42CrMo, 35CrMo အဖြစ်, အမြင့်အရည်အသွေးကာဗွန်သံမဏိနှင့်အနိမ့်အလွိုင်းသံမဏိပါဝင်သည်။
စံ: GB ကို / 8162-2008
grade Group မှ: etc 10,20,35, 45, Q345, Q460, Q490, Q620,42CrMo, 35CrMo,
လျှောက်လွှာ: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပိုက်, စက်မှုပိုက်
အသုံးပြုမှု: ဆောက်လုပ်ရေး, စက်မှု
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ကာဗွန်အခြေခံအဆောက်အဦးသံမဏိ, အလွိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိနှင့်စက်မှုအဆောက်အဦများ Make အသုံးပြုသည်။
ကာဗွန်အခြေခံအဆောက်အဦးသံမဏိ၏ grade: 10,20,35, 45, Q345, Q460, Q490, Q620 ,, etc
အလွိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသံမဏိတန်း: 42CrMo, 35CrMo, etc
တစ်ဦး။ Q345A နှင့် Q345B အဆင့်အပြင်, သံမဏိဟာသန့်စင်ပြီးစပါးကိုဒြပ်စင်အယ်လ်, NB, V ကိုနှင့်တီ၏အနည်းဆုံးတစ်ဦးမှာမဆံ့သငျ့သညျ။ လိုအပ်ချက်များအရ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမွမ်းမံဘောဇဉ် element တွေကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ table ထဲမှာသတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်အများဆုံးတန်ဖိုးကိုဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ, NB + V + တီကပို 0,22% ထက်မက ခ။ Q345, Q390, Q420 နှင့် Q46O အဆင့်အဘို့, မို + CR 0,30% ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်မဟုတ် က c ။ တစ်ဦးချင်းစီတန်း၏ CR နှင့်နီကျန်နေတဲ့ဒြပ်စင်အဖြစ်အသုံးပြုကြသောအခါ, CR နှင့်နီများ၏ content 0,30% ထက် သာ. ကြီးမြတ်မဖြစ်သင့်; ကထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်သောအခါ, content တွေကိုစားပွဲအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသင့်တယ်သို့မဟုတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှတဆင့်ပေးသွင်းနှင့်ဝယ်ကဆုံးဖြတ်ပါစေ။ ဃ။ အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာစားပွဲပေါ်မှာအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံကြောင်းသေချာစေရန်နိုင်လျှင်, နိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေမည်မဟုတ်ပါ။ အယ်လ်, NB, V ကို, တီနှင့်နိုက်ထရိုဂျင် fixation နှင့်အတူအခြားအလွိုင်းဒြပ်စင်သံမဏိထည့်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်, နိုက်ထရိုဂျင်အကြောင်းအရာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ နိုက်ထရိုဂျင် fixation အကြောင်းအရာအရည်အသွေးလက်မှတ်အတွက်သတ်မှတ်ရပါမည်။
အီး။ အပြည့်အဝလူမီနီယံသုံးပြီးသောအခါ, စုစုပေါင်းလူမီနီယံအကြောင်းအရာ Alt ≥ 0020% ။
ကာဗွန်နှင့်ညီမျှ CEV (အစုလိုက်အပြုံလိုက်အစိတ်အပိုင်း) /%
အမည်ခံနံရံအထူ S2> 16 mm~30 မီလီမီတာ
အမည်ခံနံရံအထူက S> 30mm
သတ် + ဒေါသ
grade အရည်အသွေးအဆင့်အထိ အထွက်နှုန်းအစွမ်းသတ္တိ အောက်ပိုင်းအထွက်နှုန်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ ကြေကွဲပြီးနောက် elongated သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်
အမည်ခံနံရံအထူ အပူအအေး စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူ
<16 မီလီမီတာ > 16 mm~ > 30 မီလီမီတာ
၂၀ မိနစ် - • > 450 275 265 255 20 - 一
၂၅ သန်း - > 490 295 285 275 18 - -
Q345 တစ်ဦးက 470-630 345 325 295 20 - 一
B က4~ 20 34
ကို C 21 0
D ကို -20
အီး -40 27
Q39O တစ်ဦးက 490-650 390 370 350 18
B က 20 34
ကို C 19 0
Q42O တစ်ဦးက 520~680 420 400 380 18
Q46O ကို C 550~720 460 440 420 17034
Q500 ကို ကို C 610~770 500 480 440 17055
D ကို -20 47
အီး -40 31
Q550 ကို C 670~830 550 530 490 16055
Q62O ကို C 710~880 620 590 550 15055
Q690 ကို C 770~94 ။ 690 660 620 14055
မဟုတ်ဘူး grade အကြံပြုအပူကုသမှုစစ်အစိုးရကို ဆန့ဂုဏ်သတ္တိများ Annealed သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအပူချိန်စနစ်ဖြစ်ပြီးသံမဏိပိုက် Delivery ခွအေနအေ Brinell ခိုင်မာသော HBW
ပြေ (Normal) သမ အထွက်နှုန်း StrengthMPa ဆန့ခွန်အား MPa တစ်ဦးက% ကိုချိုးဖောက်ပြီးနောက် elongated
အပူအအေး အအေး အပူအအေး အအေး
ပထမ ဒုတိယ ထက်မနည်း သာ. ကြီးမြတ်ထက်မ
1 40Mn2 840 ရေ, ရေနံ 540 ရေ, ရေနံ 885 735 12 217
2 45Mn2 840 ရေ, ရေနံ 550 ရေ, ရေနံ 885 735 10 217
3 27 ဆိုင်း 920 ရေ 450 ရေ, ရေနံ 980 835 12 217
4 40MnBc 850 ဆီ 500 ရေ, ရေနံ 980 785 10 207
5 45MnBc 840 ဆီ 500 ရေ, ရေနံ 1 030 8359217
6 20Mn2Bc'f 880 ဆီ 200 ရေ, လေ 980 785 10 187
7 20CrdJ 880 800 ရေ, ရေနံ 200 ရေ, လေ 835 540 10 179
8 30Cr 860 ဆီ 500 ရေ, ရေနံ 885 685 11 187
9 35Cr 860 ဆီ 500 ရေ, ရေနံ 930 735 11 207
10 40Cr 850 ဆီ 520 ရေ, ရေနံ 980 7859207
11 45Cr 840 ဆီ 520 ရေ, ရေနံ 1 030 8359217
12 50Cr 830 ဆီ 520 ရေ, ရေနံ 1 080 9309229
13 38CrSi 900 ဆီ 600 ရေ, ရေနံ 980 835 12 255
14 20CrModJ 880 ရေ, ရေနံ 500 ရေ, ရေနံ 885 685 11 197
15 35CrMo 850 ဆီ 550 ရေ, ရေနံ 980 835 12 229
16 42CrMo 850 ဆီ 560 ရေ, ရေနံ 1 080 930 12 217
17 38CrMoAld 940 ရေ, ရေနံ 640 ရေ, ရေနံ 980 835 12 229
18 50CrVA 860 ဆီ 500 ရေ, ရေနံ 1 275 1 130 10 255
19 2OCrMn 850 ဆီ 200 ရေ, လေ 930 735 10 187
20 20CrMnSif 880 ဆီ 480 ရေ, ရေနံ 785 635 12 207
21 3OCrMnSif 880 ဆီ 520 ရေ, ရေနံ 1 080 885 8 229
22 35CrMnSiA £ 880 ဆီ 230 ရေ, လေ 1 6209229
23 20CrMnTie-,f880 870 ဆီ 200 ရေ, လေ 1 080 835 10 217
24 30CrMnTie *f880 850 ဆီ 200 ရေ, လေ 1 4709229
25 12CrNi2 860 780 ရေ, ရေနံ 200 ရေ, လေ 785 590 12 207
26 12CrNi3 860 780 ဆီ 200 ရေ, လေ 930 685 11 217
27 12Cr2Ni4 860 780 ဆီ 200 ရေ, လေ 1 080 835 10 269
28 40CrNiMoA 850 - ဆီ 600 ရေ, လေ 980 835 12 269
29 45CrNiMoVA 860 - ဆီ 460 ဆီ 1 470 1 3257269
တစ်ဦး။ table ထဲမှာစာရင်းဝင်အပူကုသမှုအပူချိန်၏ Allow ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး: နျအအေး± 15 ℃, မြေဆီလွှာ 50 ℃ tempering ± 20 ℃မြင့်မားသောအပူချိန် tempering အနိမ့်သောအပူချိန်။ ခ။ အဆိုပါဆန့စမ်းသပ်မှုများတွင် transverse သို့မဟုတ် longitudinal နမူနာယူနိုင်ပါတယ်။ သဘောထားကွဲလွဲမှု၌, longitudinal နမူနာခုံသမာဓိများအတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ က c ။ boron ပါဝင်သောသံမဏိနျအအေးမတိုင်မီပုံမှန်ရနိုင်, နှင့်ပုံမှန်အပူချိန်က၎င်း၏သတ်အပူချိန်ထက်ပိုမိုမြင့်မားမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဃ။ ဝယ်လိုအားများကသတ်မှတ်ထားသောဒေတာအစုတခုအရသိရသည် Delivery ။ အဆိုပါတောင်းဆိုချက်များကိုသတ်မှတ်ထားသောမရှိသေးပေအခါ, ဖြန့်ဝေဒေတာမဆိုနှင့်အညီဖန်ဆင်းထားနိုင်ပါတယ်။
အီး။ မင် Meng နှင့်အတူတိုက်တေနီယမ်သံမဏိ၏ပထမဦးဆုံးသတ်ပုံမှန်အားဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
f ။ 280 ကို C ~ 320 C. မှာ Isothermal သတ်
ဆ။ rel တိုင်းတာမရနိုင်လျှင်ဆန့စမ်းသပ်မှုများတွင်, Rp0.2 အစား rel ၏တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
လမ်းပိုင်းမာ, Shock, စကွပ်, Bende, Ultrasonic စမ်းသပ်ခြင်း, Eddy လက်ရှိ, detection စနစ်, ယိုစိမ့်ထောက်လှမ်း, သွပ်ရည်စိမ်
GB ကို / T က 8162-2008
GB ကို 6479-2013
ယခင်: ASME လုပ် SA-106 / လုပ် SA-106M-2015 ကာဗွန်သံမဏိပိုက်
နောက်တစ်ခု: ပစ္စည်းကိရိယာများ-GB6479-2013 processing High-ဖိအားဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအဘို့အ Seamlless သံမဏိပြွန်